कर नतिर्ने सबैको बैंक खाता रोक्का ! - Aathikbazarnews.com कर नतिर्ने सबैको बैंक खाता रोक्का ! -
कर नतिर्ने सबैको बैंक खाता रोक्का !
सरकारले करको दायरामा नआउने कम्पनी फर्म, हाउजिङ्ग लगायत सबै उद्योग व्यवसायले कर नतिरे उसको बैंक खाता बन्द गर्ने भएको छ ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर गरी २१ करोड रुपैयाँ नतिर्ने ६ व्यावसायिक फर्ममाथि कर कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । लामो समयदेखि दुवै कर बक्यौता राखी कर नतिर्ने सवारी साधन बिक्रेतादेखि अपार्टमेन्ट निर्मातासम्मको बैंक खाता रोक्का गर्ने तयारी गरेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले बतायो ।
कर नतिर्नेहरुमा लोक इलेक्ट्रोनिक्स, कोहिनुर हिल हाउजिङ र ओरिएन्टल बिल्डरको बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसैयरी ओरिएन्टल बिल्डरको पनि बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको भेटिएको छ । यी कम्पनीले १२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कर चुक्ता गर्न बाँकी छ ।
त्यसैगरी सवारी साधन बिक्रेता पशुपति अटो मोबाइल पर्सा तथा त्रिपुरेश्वर कन्डक्टर प्रा.लि. माथि पनि कारबाही अघि बढाइएको भेटिएको छ ।
दक्षिणकाली इन्कर्पोरेटको बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिन्छ । यस कम्पनीले सब डिलर भएर महिन्द्राको गाडी बिक्री गथ्र्याे । कानुन अनुसार लाग्ने कर नतिर्ने माथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिन्छ ।
ढिलै भएपनि सरकारले थालेको यस कदमलाई स्वागत योग्य मान्नै पर्दछ । कर तिर्नु सबै नेपालीहरुको कर्तव्य मात्रै होइन दायित्व पनि हो ।
बैंकहरुले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेप देखाउन पाउने
मर्जर हुन लागेको भन्दै हल्लामा बाणिज्य बैंकको शेयरमा उछाल !!
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्‍यो देशको आर्थिक विवरण
कृषि क्षेत्रलाई उद्योगमा बदल्नुपर्छ : अर्थमन्त्री शर्मा